Home Somali News Italy: Dad ka badan 2000 qof oo laga soo badbaadiyey xeebaha dalka...
In ka badan 2000 oo muhaajiriin ah ayaa laga soo badbaadiyey xeebaha Libya kadib markii ay ku sigteen in ay la degaan doonyihii ay la socdeen.
Taliska Ciidanka Badda Talyaaniga ayaa sheegay in dadkan ay la socdeen in ka badan 20 doonyood oo ah nooca yar yar kuwaas oo ay iska buuxiyeen.
Howlgalka gurmadka oo bilowday shalay oo sabti ahayd ayaa lagu guuleystay in si nabad ah lagu badbaadiyo muhaajirintaan oo kusii jeeday Talyaaniga, waxaana la sheegay in ay u badan yihin Suuriyaan.
Sanadkan ayaa noqdey kii ugu badna qulqulka muhaajiriinta dalka Talyaaniga ee kasoo baxaya Libya, waxaana Qaramada Midoobey ay sheegtay in dad ka badan 100,000 qof ay gaareen xeebaha Talyaaniga.
Sidoo kale dad ka badan 2,000 qof ayaa ku dhintey badda halista baddan ee Mediterranean-ka, waxaana xusid mudan in markii hore muhaajiriinta oo ay u badnaayeen Afrikaan in hadda ay kusoo biireen Carab.
Mashaakilka tahriibka Yurub oo ah mid caalamka si weyn u gilgilay sanadkan ayaa u wacan rabshadaha ka aloosan Bariga dhexe iyo qaar kamid ah wadamada Afrika.
Somaliland: Madaxweyne Siilaanyo Oo Xaalad Caafimaad Daro La Soo Daristay Oo Si Dhakhso Ah Logu Qaadi Doono Dalka Imaaradka Carabta
Somaliland: Madaxweyne Siillaanyo Oo Markii U Horreysay Ka Shaaciyey Awaamiir Sharciga Dhadhansiinaya Shaqaallaha Dawaldda Ee U Kala Jiibiya Jileyaasha Ku Loollamaya Saaxadda Siyaasadda